Wiseplay, dhammaan kanaallada adduunka mobilkaaga ku jira [TUTORIAL] | Wararka IPhone
Wiseplay, dhammaan kanaallada adduunka mobilkaaga ku jira [TUTORIAL]
Marar badan, sida aan TV-ga ugu daawano aaladahayada iOS-ka ayaa noqda mid caajis badan oo aan loo dulqaadan karin. Sababta ugu horeysa ayaa ah in kanaalada badankood ay nagu qasbayaan inaan barnaamijyadooda ku rakibno qalabkeena markay ogaadaan inaan ka helno boggooda internetka biraawsarka moobiilka. Dhibaatada kale ayaa ah in codsiyada telefishanka ee lagu bixiyo iOS App Store ay aad u liitaan inta badan. Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhan waxay leeyihiin xal mahadsanid Wiseplay, waa codsi si fudud u noqon kara xarun warbaahin badan. Tallaabooyin yar gudahood waxaad ku heli doontaa dhammaan kanaallada adduunka oo dhan iPhone-kaaga ama iPad-kaaga, waana kuu sharxi doonaa sida.
Aynu marka hore qaadno taxaddarrada saxda ah, waxaan dooneynaa inaan ka tilmaanno iPhone News in ujeedkeennu yahay inaan ku barinno inaad ku darto liisaska wadiiqooyinka furan, kuwa guud ama kuwa gaarka loo leeyahay, laakiin aysan ku bixinaynin waxyaabaha ay ka kooban yihiin ee ku qoran rukhsadda bixinta xilliyada. Maxaan dooneynaa inaan ku muujino tan? In aynaan dhiirigalinaynin isticmaalka sharci darrada ah ee macnahan soo saarista taranka. Thanks to Wiseplay waxaan arki karnaa kanaallo sida Antena 3, TVE ama Tele 5Si kastaba ha noqotee, adeegsadayaasha xiisaha leh waxay sidoo kale yaqaanaan habab lagu daawado kanaalada lacagta lagu bixiyo ama waxyaabaha maqalka ah ee xaddidan xuquuqda daabacaadda, waxaan kugula talineynaa adeegsiga mas'uuliyadda ah.
1 Waa maxay Wiseplay?
2 Sideen ku helaa Wiseplay sidee bayse u shaqaysaa?
3 Sida loogu daro liiska kanaalka Wiseplay iyo sida loo helo
Waa maxay Wiseplay?
Wiseplay waa codsi noo oggolaanaya inaan ku ciyaarno kanaallada telefishanka si bilaash ah, waa inaan si fudud ugu darnaa cinwaankooda mareegaha nidaamka arjiga liiska. Wiseplay waa mashruuc iskudhufnaan badan, waxay leedahay codsi loogu talagalay macruufka, macOS, Windows iyo AndroidTaasi waa sababta qaar badani u doorteen inay ka dhigaan Wiseplay xaruntooda warbaahineed ee badan, maaddaama aan mideyn karno xiriirka aan la leenahay nooca noocan ah adoo adeegsanaya Wiseplay dhammaan qalabkeenna si dhakhso leh oo fudud. Intaa waxaa sii dheer, isdhexgalkiisu waa mid dareen leh sida aan wax ugu darno runtii waa wax fudud.
Xaqiiqdii yaa macno siinaya Wiseplay waa bulshada isticmaaleyaasha ah, ee dhibaatada ku haya sameynta liisaska kanaalka, qaabkan waxaan ku arki karnaa kanaallo badan oo xiisaynaya Wiseplay hal liis. Liisaskan waxaa wadaagaya isticmaaleyaasha golayaasha leh mowduucyo isku mid ah waxaan si fudud ugu dari karnaa adoo isticmaalaya cinwaanka URL ama lambar QR ah, waxaan si fudud u raadineynaa liiska oo ay ku jiraan waxyaabaha na xiiseynaya, ama isku day in aan sameysano liis u gaar ah oo aan ugu adeegsano shaqsi ahaan.
Sideen ku helaa Wiseplay sidee bayse u shaqaysaa?
Waxaan mar kale xasuusannaa inaan sharciga ku dhex jirno, tan macnaheedu waa Wiseplay cwaafaqsan heerarka Apple sidaa darteedna ay xor u tahay in laga helo macruufka App Store, waana sidaas. Waxaan si fudud u tagnaa macruufka App Store si aan u soo degsanno arjiga rasmiga ah, ma sahlanaanin. Codsiga gabi ahaanba waa bilaash, laakiin waxaa ku jira xayeysiis, si gabi ahaanba looga saaro arjiga waa inaan iibsanaa nooca "Premium", wax iska caadi ah, si kastaba ha noqotee, waayo-aragnimadayda waxaan dhihi karaa nooca bilaashka ah ayaa si fiican loo qaadaa, waa kaliya waxay sii deyneysaa ogeysiis yar oo shan ilbidhiqsi ah kahor intaan la daadin mid ka mid ah kanaallada aan doorannay.
Codsiga waxaa lagu heli karaa laba luqadood, Ingiriis iyo Isbaanish. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, waxaa na horyaalla codsi guud oo caalami ah, oo ah, la jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod Touch. Marka la eego waafaqsanaanta qalabka, waxaan xoogga saareynaa taas waxaan u baahin karnaa waxyaabahayaga adoo adeegsanaya AirPlay si fududmaaddaama ay isticmaasho macallinka asaliga ah ee iOS. Dhinaca kale, waxa kale oo ku jira badhanka Chromecast ee u gaarka ah xagga sare, tani macnaheedu waa inaan wax badan ka qaban karno qalabkan oo aan maalmo ka hor idiin soo bandhignay kanaalkayaga Youtube.
Sida loogu daro liiska kanaalka Wiseplay iyo sida loo helo
Waxa ugu fudud ayaa ah in la isticmaalo mashiinka raadinta haddii waxa aan dooneyno ay tahay in la raadiyo liiska Wiseplay. Liisaska Wiseplay guud ahaan waxay ku jiraan URL oo leh dhammaadka «.w3u«, Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale liisaska si toos ah uga heli karnaa« xiriiriyeyaashaPastebin«, Taas oo ka dhigaysa hawsha mid aad u fudud. Adiga ayay ku xiran tahay inaad isticmaasho liisaska si adag sharciga ugu hoggaansan. Haddii aad rabto wax dheeraad ah ama aad raadinayso nooc kale oo nuxur ah, waxaan ku dhejinayaa mashiinka raadinta Google, oo leh raadinta fudud ee «Liisaska Wiseplay»Waxaad heli doontaa natiijooyin badan oo lagu qanco.
Si loo daro liis, waxaan marka hore raadineynaa liiska ilaha aan bixino oo aan nuqul ka sameeyno iskuxirka liiska ee su'aasha kujira boodhka. Waxaan si fudud u gujineynaa xumbada gaduudka hoose ee bilowga dalabka oo waxaan dooranaa «Kudar URL«, Waxaan haysan doonnaa kanaalkayaga cusub ama liiska kanaalka oo la heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Wiseplay, dhammaan kanaallada adduunka mobilkaaga ku jira [TUTORIAL]
Aad u xiiso badan, mar dambe ayaan isku dayi doonaa, waan faalleeyaa. Mahadsanid salaan
Waa salaaman tahay, habeen wanaagsan, qofna ma liis liis ah oo ka shaqeeya iPhone 6 Splus, mahadsanid
Ku jawaab Emilio
Markaad si fiican u shaqeyso, waad arki kartaa kanaalada ugu waaweyn ee Isbaanishka ee tdt iyo kanaalka oo lagu daray xirmo filimo, isboorti iyo taxane ah, waxa kaliya ee hoos u dhacayaa waa markaan u diro chromecast wuxuu ii sheegayaa in qaabku uusan ansax ahayn, wayna xanuunaysaa. Hadaad ereyga ii dhaafto, url ayaan soo galin doonaa, waa la cusbooneysiiyay Ogosto 2016
Aad baan u bogaadinayaa hadaad soo rarto 🙂
Aad baad u mahadsantahay runtii! 🙂
Wiseplay wuu balan qaadayaa laakiin ma bixiyo! Waxaan sugayay 3 bilood oo aan u dirayo Chromecast si aan u shaqeeyo oo xitaa aanan u xirmin!
Wixii android ah waxaan fahamsanahay inay sifiican usocoto laakiin macruufka waa pestiño, rabitaan mana awoodo.
Ku jawaab Lorz
U dirista Chromecast aniga ayey igu fiican tahay. Waxaad u baahan kartaa inaad adeegsato liisas kale.
Runtii? Isiiya tilmaam! Waxaan isku dayay qaar badan waxaanan u arkaa inayna macquul ahayn.
Waxaan kaa codsanayaa inaad si maldahan uhesho! Hadaadan awoodin / aadan rabin inaad dhigto xiriiriye, ii sheeg ugu yaraan qoraaga liisaska aad isticmaaleyso waana raadin doonaa.
Waan ka xumahay faallooyinka nuqul ah, ma aanan arkin 'jawaab'
Wax fikrad ah maleh, waxay aniga ilatahay uun.
Iyo si iyaga loogu diri karo airplay appletv? Markii aan beddelo ikhtiyaarka aan ugu ciyaaro qalabka wax lagu duubo ee nidaamka dhexdiisa ah, waxay awood u leedahay oo keliya inay ka ciyaarto kanaallada "bilaashka ah" waxaanan idhaahdaa "bilaash" maxaa yeelay waxaan horay ugu bixinnay iyaga oo ku saleysan xayeysiin, hase yeeshee kuwa la siiyay ma ciyaaraan si toos ah iyaga, in Haa, waxay si fiican ula shaqeeyaan codsigooda ciyaartoy u gaar ah, laakiin uma diri karo appletv
Ma jiraa qof garanaya sida loo sameeyo?
Waxay u shaqeysaa sifiican, mahadsanid !!
Waxaan u raadinayaa barnaamij Apple TV 4 oo waliba soo rogi kara liisaskan wax lagu qorayo, laakiin weli ma helin. Ma jiraa cid wax ka ogtahay ??
Wanaagsan, mahadsanid !!
Ma jiraa qof og wax App ah oo loogu talagalay Apple TV 4 oo waliba soo rogi kara liistada liidashada?
Miguel, maad isticmaaleysid android? marka hore maxaa yeelay barnaamijka iOS-ka ah kama saari kartid xayeysiinta iyo tan labaad, cidina ma awoodo inay dirto chromecast, laakiin waad awoodi kartaa?
Ku jawaab AlbertoV
Liis kasta oo aan galiyo waxaa aqoonsaday perl markaan rabo inaan wax furo, Suuragal MA ahan IN AAN MUUQAALKA DHIGO. Waxaan hayaa iphone 4s leh dhamaan wixii cusbooneysiin ah oo aan JAILBREAK lahayn. Qaar baa caawiya ??
Ku jawaab 4an
Isla sidaas ayaa igu dhacda. Marka laga reebo 1, kanaalka intiisa kale waxbaba kama jiraan. Anigana dhowr jeer ayaan isku dayay. Waxay ila tahay inay ku sii jiri doonto wax yar qalabka.
Waxaan ka soo dejiyey Wiseplay on my iPhone 6 oo kuma xirna TV-ga markii ay kuwa kale sameeyaan
Ku jawaab Soniasempgal
unhamed. for iphone dhan:
Sabir ahaanshaha waa la cusbooneysiiyaa oo kaliya si loo siiyo dhowr maalmood ugu badnaan, laakiin saacado yar gudahood way diyaar noqon doontaa.
Waa salaaman tahay qof fiican wuxuu leeyahay liis wanaagsan oo aan loo jarin iPhone 6 S oo lagu daray mahadsanid dhammaan
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan haystaa Samsung Galaxy Grand Neo oo lagu daray, waxaan daawadaa dhowr telefishanno telefishan ah laakiin ma jirto hab lagu arko 1 iyo 2. Ma jiraa qof liis u leh inuu arko tv1 iyo tv2? Aad baad u mahadsantahay
Shirkadda Spotify ayaa beenisay eedaha loo haysto ee ah ciqaabidda waxyaabaha ka baxsan Apple Music
Apple kuma ciyaarso cadaalad Ireland, waa tan sida ay uga faa'iideysato daaweynta mudnaanta leh